Inona no atao hoe Reputation adiresy IP ary ahoana no fiantraikan'ny isa IP anao amin'ny fahafahanao mailaka? | Martech Zone
Raha ny fandefasana mailaka sy ny fanombohana ny doka amin'ny marketing amin'ny mailaka, ny fikambanana Isa IP, na Laza IP, dia tena zava-dehibe. Fantatra amin'ny anarana hoe a isa mpandefa, ny lazan'ny IP dia misy fiantraikany amin'ny fandefasana mailaka, ary izany dia ilaina amin'ny fampielezana mailaka mahomby, ary koa amin'ny fifandraisana betsaka kokoa.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia dinihintsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny isa IP ary jerena ny fomba ahafahanao mitazona laza IP matanjaka.
Inona ny isa IP na ny laza IP?
Ny isa IP dia isa mifandraika amin'ny lazan'ny adiresy IP. Manampy ireo mpanome tolotra hanombatombanana raha toa ka lasa nandalo ny sivana spam ilay mailaka na tsia. Ny isa IP anao dia afaka miova arakaraka ny anton-javatra isan-karazany, ao anatin'izany ny fitarainan'ny mpandray sy ny fotoana andefasanao mailaka.
Fa maninona no zava-dehibe ny laza IP?
Ny isa IP matanjaka dia midika fa heverina ho loharano azo antoka ianao. Midika izany fa hahatratra ny mpandray anao kasaina ny mailakao ary noho izany ny fampielezana mailaka ataonao dia misy vintana lehibe kokoa hahomby. Mifanohitra amin'izany, raha mahatsikaritra mailaka matetika avy amin'ny fikarohanao ao amin'ny folder spam-ny ny mpanjifanao dia mety hanomboka hanome endrika ratsy ny orinasa izany, izay mety hisy fiatraikany maharitra.
Ahoana no fiantraikan'ny lazan'ny IP anao amin'ny famoahana ny mailaka?
Ny lazan'ny IP an'ny mpandefa dia ampahany amin'ny fizahana fanapahan-kevitra raha tonga any amin'ny mailaka ny mailaka iray Inbox na ny fampirimana spam. Ny laza ratsy dia midika fa ny mailaka ataonao dia azo inoana fa voamarika ho toy ny spam, na amin'ny toe-javatra sasany dia nolavina tanteraka fotsiny. Mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fikambanana izany. Raha te hatoky tena amin'ny fahafahan'ny mailakao ianao, dia zava-dehibe ny fitazonana ny lazan'ny mpandefa matanjaka.
Inona ny fahasamihafana misy amin'ny adiresy IP voatokana sy ny adiresy IP zaraina?
Mety ho gaga ianao raha mahafantatra fa ny ankamaroan'ny mpanome tolotra mailaka dia tsy manome a vita fanoloran-tena Adiresy IP ho an'ny kaontiny tsirairay. Raha atao teny hafa, ny kaonty fandefasanao dia nizara manerana ny kaonty mailaka maro. Mety ho tsara na ratsy io arakaraky ny lazan'ny IP Address:
Tsy misy Reputation IP - Ny fandefasana mailaka marobe amin'ny adiresy IP vaovao tsy misy laza dia mety hanakana ny mailakao, alefa amin'ny folder junk… na ho voasakana eo no ho eo ny adiresy IP misy anao raha misy milaza ny mailaka ho SPAM.
Reputation IP nozaraina - Ny laza adiresy IP nozaraina dia tsy voatery ho zavatra ratsy. Raha tsy mpandefa mailaka lehibe ianao ary misoratra anarana amin'ny kaonty miaraka amin'ny mpanome tolotra mailaka mendri-kaja, dia afangaron'izy ireo amin'ny mailaka hafa ny mpandefa mailaka azonao antoka fa voateraka tsara ny mailakao. Mazava ho azy fa mety ho tonga amin'ny olana amin'ny serivisy tsy dia misy laza ianao izay mamela ny SPAMMER handefa io adiresy IP io ihany.
Reputation IP natokana - Raha mpandefa mailaka lehibe ianao… matetika ny mpanjifa 100,000 XNUMX isaky ny mandefa, ny adiresy IP natokana dia tsara indrindra hahazoana antoka fa afaka mitazona ny lazanao manokana ianao. Na izany aza, mila adiresy IP mafanafana… Dingana iray izay andefasanao Mpamatsy Aterineto manokana volavolan-dalàna voafaritra ho an'ny mpikirakira anao indrindra mandritra ny fotoana iray hanaporofoana amin'ny ISP fa mendri-kaja ianao.
Ahoana no ahazoanao antoka fa misy laza IP mahery?
Misy antony isan-karazany momba ny famaritana sy ny fitazonana ny lazanao IP. Ny famelana ny mpanjifa hisoratra anarana mora foana amin'ny mailakao raha tiany izany dia dingana iray azonao atao; hampihena ny fitarainan'ny spam momba ny mailaka nataonao izany. Tandremo tsara ny isan'ny mailaka alefanao sy ny fotoana andefasanao azy ireo koa - ny fandefasana be loatra ny fifandimbiasana haingana dia mety hanimba ny lazan'ny IP anao.
Dingana mahasoa iray hafa ny fanamarinana ireo lisitry ny mailakao amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba opt-in na fanesorana matetika ireo adiresy mailaka mivoaka avy ao amin'ny lisitry ny mailakao. Ny isa marina anao dia hiova foana rehefa mandeha ny fotoana, fa ny fanarahana ireo dingana ireo dia hanampy azy hijanona ho matanjaka araka izay tratra.
Ahoana no fomba hamoronana laza malaza amin'ny mpandefa vaovao?
Na mandefa hafatra be dia be amin'ny alàlan'ny mpizara mailakao ianao, na nisoratra anarana ho mpanome tolotra mailaka vaovao, ny IP Warming dia ireo dingana ilainao hamoronana laza voalohany sy matanjaka ho an'ny adiresy IP anao.
Vakio bebe kokoa momba ny IP Warming
Fitaovana hijerena laza IP
Misy rindrambaiko isan-karazany izao izay mamela anao hanamarina mora foana ny lao IP anao; mety ho hitanao io mahasoa io alohan'ny fampielezana varotra be. Ny rindrambaiko sasany dia afaka manome torolàlana momba ny fomba hanatsarana ny naotin'ny mpandefa anao mandroso ihany. Ireto misy vitsivitsy hanombohana anao:
SenderScore - Validity's SenderScore dia refesin'ny lazanao, nisaina hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 100. Arakaraka ny maha ambony ny isa anao no mahabe ny laza anao ary matetika no avo kokoa ny vintana handefasana ny mailakao amin'ny boaty fa tsy ny fampirimana junk. SenderScore dia isaina amin'ny salan'isa maharitra 30 andro ary mametraka ny adiresy IP anao amin'ny adiresy IP hafa.
BarracudaCentral - Ny Barracuda Networks dia manome IP sy fanaraha-maso ny lazany amin'ny alàlan'ny rafitra Reputation Barracuda; tahiry data adiresy IP misy miaraka amin'ny mahantra or tsara lazany.
TrustedSource - tantanan'i McAfee, TrustedSource dia manome fampahalalana momba ny mailaky ny mailaka sy ny lazan'ny tranokalanao.
Fitaovana Google Postmaster - Google dia manolotra ny fitaovan'ny paositra ho an'ny mpandefa anao, ahafahanao manara-maso ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra amin'ny Gmail. Manome fampahalalana izy ireo ao anatin'izany ny lazan'ny IP, ny lazan'ilay faritra, ny lesoka amin'ny fandefasana Gmail, sns.
Microsoft SNDS - Mitovy amin'ny Tools an'ny Postmaster an'ny Google, manolotra serivisy antsoina i Microsoft Serivisy data Smart Network (SDNS). Anisan'ny angon-drakitra nomen'ny SNDS ny fahitana ireo teboka tahirin-kevitra toy ny fandefasanao ny lazan'ny IP, firy amin'ireo fandrika spam Microsoft no atolotrao, ary ny tahan'ny fitarainan'ny spam.
Cisco Senderbase - Tahirin-kevitra momba ny fandrahonana amin'ny fotoana tena izy amin'ny IP, sehatra na tambajotra hahafantarana ny SPAM sy ny fandefasana mailaka ratsy.
Raha mila fanampiana bebe kokoa amin'ny lazan'ny fikambanana na ny mailaka fanaterana mailaka ianao, mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Tags: tambajotra barracudampamatsy tolotra mailakaESPfitaovana postmaster googlefametrahana boatympamatsy serivisy amin'ny Internetadiresy IPLaza adiresy IPIsa adiresy IPip lazaisa ipISPsenderscorefitokisanamampanankery